Turkiyaan jila Itti aanaa Prezdaantii biyyattiitiin durfamu gara Niiw Ziilaand ergite - NuuralHudaa
Turkiyaan jila Itti aanaa Prezdaantii biyyattiitiin durfamu gara Niiw Ziilaand ergite
On Mar 16, 2019 6
Haleellaa shororkeessitoonni kaleessaa Niiw Ziilaand keessatti muslimoota irratti raawwataniin namoonni 49 ajjeefamuun 40 ol ammoo madaayaniiru. Turkiyaa dabalatee biyyoonni muslimaa heddu ajjechaa sukkanneessaa kana kan balaaleffatan yoo tahu, dabalataanis mootummaan Turkiyaa har’a itti aanaa prezdaantii biyyattii fi ministeera haajaa alaa gara Niiw Ziilaand erguu gabaafame.
Itti aanaan prezdaantii Turkiyaa Fuat Oktay gara Niiw Ziiland osoo hin imalin dura buufata Xiyyaara Istaanbulitti ibsa kenneen, “haleellaan shororkeessitoonni Niiw Ziilaandatti muslimoota irratti raawwatan jibbiinsi Islaamummaa babal’ataa dhufuu kan mul’isu waan taheef, biyyoonni addunyaa hundi jibbiinsa Islaamummaa kana ifatti akka balaaleffatan ni gaafanna” jedhe.
Shororkeessitoota ajjeechaa kana raawwatan keessaa tokko kanaan dura yeroo lama gara Turkiyaa fi biyyoota Balkan imaluu eega gabaafamee booda, mootummaan Turkiyaa dhimmicha irratti gad fageenyaan qorannoo jalqabuu beeksisee jira.
Ajjeechaa kaleessa masjiidota lama keessatti raawwatame kanaan wal qabatee nammoonni sadi too’annaa jala kan oolan yoo tahu, namtichi haleellaa kana addadurummaan qindeessuun raawwate jibbiinsa Islaamummaaf qabu Sanadii Irbuu (manifeestoo) fuula 70 irratti addeesseera. Barreeffama isaa kana keessatti muslimoota irratti haleellaa raawwachuu, addatti ammoo Turkiyaa diiguudhaaf kan karoorfate tahuu ibse. Akkasumas shororkeessaan kun Prezdaantii Ameerikaa kan dinqisiifatu akka taheefi, ool’aantummaa ummata adii addunyaarratti mirkaneessuudhaaf adeemsa Donaald Traampiin kan oonnate tahuu hime.
May 18, 2022 sa;aa 6:48 am Update tahe